China fiberglass nokwelukiweyo abakhiqizi futhi abahlinzeki | I-Beihai Fiberglass
Fibreglass Nokwelukiweyo Ukuzulazula
Indwangu ye-1.Bidirectional eyenziwe ngokuhlanganiswa okuqondile okuhamba phambili.
2.Ihambisana nezinhlelo eziningi ze-resin, njenge-polyester engagcwalisiwe, i-vinyl ester, i-epoxy nezinhlaka ze-phenolic.
3.Kusetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izikebhe, imikhumbi, izindiza nezingxenye zezimoto njll.
E-Glass Nokwelukiweyo Rovings yizindwangu bidirectional eyenziwe interweaving rovings ngqo.
E-Glass Nokwelukiweyo Rovings kukhona iyahambisana eziningi resin izinhlelo, ezifana polyester unsaturated, vinyl ester, epoxy futhi phenolic resins.
I-E-Glass Nokwelukiweyo Ukuhamba phambili ukuqiniswa kokusebenza okuphezulu okusetshenziswa kakhulu ekubekeni isandla namarobhothi ekukhiqizeni izikebhe, imikhumbi, izindiza nezingxenye zezimoto, ifenisha nezikhungo zezemidlalo.
1.Warp and weft rovings kuqondaniswe ngokufana futhi kuyisicaba
ngendlela, okuholele ekuxabaneni okufanayo.
Imicu e-2.Densely ehambisanayo, okuholele ekuphakameni okuphezulu
ukuzinza nokwenza ukuphatha kube lula.
3.Good isikhunta ikhono, okusheshayo futhi ephelele ezimanzi in resins,
okuholela ekukhiqizeni okuphezulu.
Ukungafihli okungu-4 namandla aphezulu emikhiqizo ehlanganisiwe.
Ubuningi beWarp Kuphela / cm
Ubuningi be-Weft Buyaphela / cm
Isisindo se-Areal g / m2
Okuqukethwe Okusha (%)
Ukuhamba ngakunye okwelukiwe kufakwa kushubhu lephepha elinobubanzi obungaphakathi kuka-76mm futhi umqulu wamata unebubanzi obungu-220mm. Iroli lokuzulazula elilukiwe lisongwe ngefilimu yepulasitiki, bese ligcwaliswa ebhokisini lekhadibhodi noma lisongwe ngephepha le-kraft. Imiqulu ingabekwa ngokuvundlile. Okokuhamba, imiqulu ingalayishwa ku-cantainer ngqo noma kuma-pallet.
Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, Kufanele igcinwe endaweni eyomile, epholile nemvula. Kunconywa ukuthi igumbi lokushisa kanye nomswakama kufanele ihlale igcinwa ku-15 ℃ ～ 35 ℃ naku-35% ～ 65% ngokulandelana.
Ukulethwa: izinsuku ezingama-20 ngemuva kokuthola idiphozi
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla ingilazi ehlanganisiwe ifuna ukulingisa kwe-centrifugal - Beihai fiberglass
Olandelayo: I-fiberglass Wall Ukumboza Izicubu Mat
Imicu Emanzi Eqoshiwe